ဆယ်ကျော်သက်များ အဆုတ်ကင်ဆာကုသရေးအသင်းအဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးဆက်ဆံမှုနည်းလမ်း (၁၀) ချက် - Hello Sayarwon
ဆယ်ကျော်သက်များ အဆုတ်ကင်ဆာကုသရေးအသင်းအဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးဆက်ဆံမှုနည်းလမ်း (၁၀) ချက်
အဆုတ်ကင်ဆာကုသမှု ခံယူနေရတဲ့အတွင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအသင်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အရေးပါတဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်မှုအတွက် အောက်ပါ (၁၀) ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေက ကင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ စိမ်းသက်နေတယ်ဆိုတာကို သူတို့ တစ်ခါတရံ မေ့သွားနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန် သူနာပြုတစ်ယောက်ယောက်ကို သင်နားမလည်တာတွေကိုရှင်းပြဖို့ တောင်းဆိုဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။ “သိပ်ပြီးတော့နားမလည်လို့ နောက်တစ်ကြိမ်ဒီထက်ပိုရှင်းအောင် ပြောပြပေးပါ” လိုမျိုးပြောသင့်ပါတယ်။
၂။ သူငယ်ချင်း (သို့) မိသားစုဝင် တစ်ယောက်ယောက်ကို ဆွေးနွေးပွဲသို့ခေါ်သွားခြင်း
သင်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ အဖြေတွေကို သူတို့ပါမှတ်သားထားခြင်းဖြင့် သင်ကျေကျေညက်ညက် နားလည်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်တွေက သိပ်ပြီးမဖော်ရွေဘူးလို့ ထင်တာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခါမျိုးမှာ သူတိုသင့်ကိုဂရုမစိုက်ဘူးလို့ ယူဆလို့ မရပါဘူး။ သင့်ကို အကောင်းဆုံး ကုသမှု ပေးနိင်ဖို့ အာရုံစိုက်နေရတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို မဖော်ပြကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်သူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုခုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် သင်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ အဖုအထစ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေ ထင်မြင်ချက်တွေကို ပြောပြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
သင်ဘာတွေကိုသိထားသလဲ၊ ဘာတွေသိချင်သလဲဆိုတာအပေါ်မူတည်ပြီး သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူက သင့်ကိုဘာတွေပြောပြရမလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပါလိမ်မယ်။ သင်ကင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေသိထားသလဲဆိုတာ နဲ့ ဘာတွေသိလိုသလဲဆိုတာကို ပြောပြပါ။ သင်ရှင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာကို နားမလည်လျှင် သင်နားလည်သလို ပြန်ရွတ်ပြပါ။ (ဥပမာ- “ဆရာပြောတာ ဒီလိုဆိုလိုတာလား…။”)
ကင်ဆာအထူးပြု သူနာပြုတွေဟာ ဗဟုသုတနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ ဆရာဝန်တွေထက် သင်နဲ့ဆွေးနွေးပြောပြနိုင်ဖို့ အချိန်ပိုပေးနိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီးတော့လည်း နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးနိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်မှန်အဖြေ ဖတ်ထားတဲ့အဖြေပုံတွေ ပြဖို့တောင်းဆိုခြင်း၊ ပုံဆွဲပြခိုင်းခြင်း၊ ဗီဒီယိုပြခြင်းတွေပြုလုပ်ပေးဖို့ သင့်ဆရာဝန်ကို တောင်းဆိုသင့်ပါတယ်။ လူတိုင်းမှာသင်ယူမှုပုံစံမတူကြတဲ့အတွက် အချက်အလက်တွေကိုမြင်ရခြင်းဖြင့် သင့်ကိုပိုနားလည်နိုင်စေပါလိမ့်မယ်။
၈။ ဘာတွေကသင့်အတွက် ပိုနားလည်လွယ်စေတယ်ဆိုတာကို ပြောပြခြင်း
သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်တာဝန်ရှိသူက သင့်အတွက်စီစဉ်ထားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြတဲ့အခါမျိုးမှာ သင်ရှင်းပြချင်တာတွေကို ပုံတွေနဲ့ပြသရှင်းလင်းခြင်းက ကျွန်ုပ်ကိုပိုနားလည်စေပါတယ် စတာမျိုးတွေ ပြောပြသင့်ပါတယ်။
သင့်ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံက သင့်ကို သက်တောင့်သက်သာခံစားရစေတယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုကြောင်းဖော်ပြသင့်ပါတယ်။
၁၀။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပေးထောက်ခံခြင်း
သင့်ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံက သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ရင် သူတို့ကိုပြောပြခြင်း သို့မဟုတ် တာဝန်ခံလဲခိုင်းခြင်းတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးကုသမှုရနိုင်ဖို့အတွက်သင့်အတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှကို သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Top ten tips for communicating with your lung cancer team. http://www.mylungcancersupport.org/assets/documents/flc-ten-tips.pdf. Accessed 28/07/2015.
နာတာရှည် အဆုတ်လေပြွန်ရောင် ရောဂါကြွချိန်များကို ကာကွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ
အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေအပေါ် ဆယ်ကျော်သက်တွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ